Ny hetsika dia tsara kokoa noho ny Fantasy-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ny hetsika dia tsara noho ny nofinofy
Fotoana: 2020-08-27 Hits: 18
Matetika ny olona milaza fa efa manomboka tsara dia vita ny antsasany. Ka inona no manomboka tsara? Heveriko fa ny fiasa irery ihany no mety ho fanombohana tsara. Raha manao zavatra iray, raha mbola ny hetsika, dia antsasaky ny fahombiazana. Hita izany fa lehibe ny herin'ny hetsika.
Ny elatry ny vorona dia lehibe, Raha tsy manandrana manetsiketsika ny elany izy, ahoana no ahafahany manidina avo? Na ambony toy inona aza ny fahaizan'ny olona iray, raha tsy miasa mafy izy, ahoana no hahombiazany? Na dia manankarena aza ny vokatra avy amin'ny firenena, raha tsy miezaka ny hampivoatra ny firenena, ahoana no ahafahany mijoro avo eo amin'ireo firenena manerantany? Izany rehetra izany dia manondro fa ny hetsika dia tsara kokoa noho ny nofinofy.
Ny hoe "action" dia tsy teny poakaty. Mila anao hampiasa ny finoana mafy orina, ny fanahy miady tsy misy fetra ary ny fahatokisan-tena ho tratrarina.
Nandritra izany fotoana izany dia nandoa ny olo-malaza isaky ny ezaka nahomby. Toa an'i Beethoven, marenina izy, jamba ary salama ara-batana noho ny olon-tsotra rehetra. Kivy ve anefa izy? Tsia, i Beethoven dia niatrika fanamby hatrany, niatrika ny fihemorana, fahatokisana ary fanantenana feno fanantenana. Ary farany, izy no lasa mpitendry mozika malaza indrindra manerantany miaraka amin'ny fihetsiny.
Ankehitriny, olona maro no manana nofy lehibe ao am-pony. Na izany aza, matetika izy ireo dia tsy manana ny finoana mafy orina, ny fanahy miady tsy azo ihodivirana ary ny finoana ny handresy, ka ny tanjon'izy ireo ihany no mitoetra ao am-bava, moa ve ity "goavambe miteny" ity koa hahavita fahombiazana mora foana? Matetika ireo olona ireo dia "manjono mandritra ny telo andro, harato roa andro." Raha tsy mihetsika mihitsy ianao, ahoana no hahatratraranao filamatra ambony?
Ry namako malala, tokony hahatadidy fahamarinana foana isika: ny hetsika dia tsara noho ny nofinofy. Manomboka amin'ny asa ny fahombiazana.
Previous: Afaka manome izay tadiavinao ny SUNSOUL
Next: Ankafizo ny manirery